Unai Emery Oo Qeyb Kasoo Noqday Musharaxiinta Ugu Cad Cad Badalka Wenger Ee Kooxda Arsenal – Gool FM
Dajiye May 13, 2018
(Arsenal) 13 Maajo 2018. Tababaraha Paris Saint-Germain, oo ku dhawaaqay inuu ka tagayo kooxda dhamaadka xilli ciyaareedkan ayaa la ogaaday halka uu kusii jeedo kadib marka uu ka dhaqaaqo PSG.
Wargeyska England kasoo baxa ee “Express” ayaa sheegay in Unai Emery uu durbabo noqday musharaxa ugu xogan ee lala xiriirinayo tababarka Arsenal si uu u noqdo badalka Arsene Wenger.
Luis Enrique iyo Massimiliano Allegri ayaa lala xiriirinayay kooxda ka dhisan London xilli ciyaareedka soo socda, laakiin wargeyska ayaa xaqiijiyay in Arsenal ay meesha ka saartay magacyada labada macalin.
Macalinka reer Spain Unai Emery ayaa wuxuu sidoo kale dalabyo kala duwan ka heystaa kooxaha Real Sociedad iyo Napoli. Balse Gunners ayaa ah meesha ku haboon uu u dhaqaaqi karo xili ciyaareedka soo aadan.
Arsene Wenger Oo Ku Dhawaaqay Inuu Sii Wadi Doono Shaqada Tababarka Kadib Arsenal